အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ပင်လယ်သေလို လူစားများ
35 Responses to “ပင်လယ်သေလို လူစားများ”
အမှန်တွေပါပဲ အဲလိုအကျင့်တွေ ကျင့်သင့်ကြောင်းပေါ့
ပင်လယ်သေ နဲ့ ယှဉ်ပြီး စဉ်းစားစရာ လေးတွေ ရသွားပါကြောင်း။
အင်မတန်မှ မှတ်သားဖို့ ကောင်းတယ်ဗျာ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ပိတ်ရက်ကတောင် ပင်လယ်သေမှာ လူတွေ အများကြီး ပေါလောပေါ်နေတဲ့ပုံ ဓါတ်ပုံရိုက်ထားတာ ကြည့်မိသေးတယ်... ကျေးဇူးပါ.. မချော...
အရမ်းကောင်းတာပဲ မချောရေ ..း)
ပင်လယ်သေလို လူစားတွေ ......
အင်း ယူသာယူတတ်ပြီး ပြန်မပေးရင် သိပ်ကြောက်စရာကောင်းလှပါလားရှင်။ အဲ့လို ပင်လယ်သေလိုလူမျိုးတွေ အရမ်းများလာရင်တော့ ရင်လေးစရာကောင်းပါတယ်။ ဆင်ခြင်စရာ ပို့စ်ကောင်းလေးမို့ မမချောကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
Got so much knowledge about the dead sea. I like the way you think, sis :)))
ဗဟုသုတနဲ့အတူ တွေးတော၊ ဆင်ခြင်အလေးထား စရာပို့စ်လေး အတွက် ကျေးဇူးပါမမရေ..
တစ်ခုနဲ့တစ်ခု သိပ်မဝေးလှတဲ့ ဒီပင်လယ်နှစ်ခုကို အခုအတိုင်း ယှဉ်ပြီး မကြည့်မိခဲ့ဘူး၊ အထူးသဖြင့် တစ်ခုထဲသော ဂျော်ဒန်မြစ်နဲ့ ပတ်သက်နေကြပေမယ့် ဖြစ်တည်လာပုံ မတူတဲ့အကြောင်းလေးကို တွေးထားတာ “လှ” တယ်ဗျ၊ မျှဝေခြင်းရဲ့ အရေးပါပုံကို မှတ်သားမိတယ်၊ မချောရဲ့ ဘလော့ဂ်လေးကတော့ မျှဝေ၊ ပေးကမ်းခြင်းတွေနဲ့ ရေစီးရေလာ ကောင်းမွန်နေလို့ ထင်ပါရဲ့၊ စိမ်းစိုလန်းဆန်းပြီး စာပျော်ငါးတွေ မပြတ် ကူးခတ်သွားလာ နေကြတာ...။း)
တကယ်တော့ ရင်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့အရာတွေတိုင်း တန်ဖိုးမရှိပါဖူး ဝေမျှသင့်ပါတယ်........
ဒီပို့စ်အရမ်းကောင်းတယ် အစ်မရေ...း)
သုတရော ရသရော အစုံပါတဲ့ ဒီပိုစ်ကို ကြိုက်မှ ကြိုက် :)
ပင်လယ်သေလိုလူစားမျိုးတဲ့ အပေးမရှိ အယူပဲရှိတဲ့သူ..။ သိပ်ကောင်းတဲ့ ဥပမာခိုင်းနှိုင်းမှုပဲ...။ ခုလို သုတလေးတွေမျှဝေပေးတဲ့ ညီမချောကိုကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်...။
အပေးအယူ တတ်ဖို့က ရွှေပြည်ကြီးက လူတွေ အရမ်းတော်ကြပါတယ်လေ နေား)
အပေးမရှိဘဲ အယူဆိုရင်တော့ သေပြီပေါ့နော
ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို ဆရာမက မေးသတဲ့ -
“ ဟေ့ ပင်လယ်သေကို သိသလား”
“ ဗျာ ပင်လယ်နေမကောင်းဖြစ်တာတောင် ကျွန်တော်သတိမထားလိုက်မိဘူး ”
ပင်လယ်သေဆိုတဲ့ စာသားကို မြင်တိုင်း အဲဒီဟာသပဲ သွားသွားသတိရတယ်...“ ဂါလိလဲ ” ဆိုတဲ့ပင်လယ်က သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ နံမည်ကြီးပေါ့ ဒေါ်ချောရေ...ကိုယ့်ဘာသာမဟုတ်ပေမယ့် ဖတ်ရင်းလေ့လာရင်း သတိထားမိတာ...အခုမှပဲ သူ့အကြောင်းကို ကောင်းကောင်းသိတော့တယ်...
အသိကို အတွေးနဲ့ ရက်ဖောက်ထားတဲ့ဒီပို့စ်ကို ဒေါ်ချောတင်သမျှထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးလို့ ဆိုရမယ်...
အလွန်မှတ်သားဖွယ် ကောင်းတဲ့ post လေးပါ အစ်မ
မချောညွှန်ပြပေးတဲ့အတိုင်း ပင်လယ်သေလိုလူစားမျိုး မဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေပါ့မယ်။
ပြောကြတယ်မလား။ "ကြက်ရေသောက်ထားသလို၊ သဲထဲရေသွန်လိုက်သလိုမျိုး" မဖြစ်ဖို့တော့ ကြိုးစားနေထိုင်ကြရမှာပါ ချောရေ။
ပင်လယ်သေလိုဘုန်းဘုန်းမဟုတ်ဘဲ ဂါလိလီဘုန်းဘုန်းဖြစ်အောင် ကြိုးစားဆဲပါ ချောရေ။
နှိုင်းယှဉ်ပြသွားပုံလေး ကောင်းလိုက်တာ အစ်မရယ်...
တကယ်... ဗဟုသုတလေးနဲ့ ယှဉ်တွဲပြသွားပုံလေး တကယ်ထိမိတယ်...
ပင်လယ်သေအကြာင်း ရေးတာခြင်း တူတာတောင် မချောက အတွေးလေးတွေ ပေးသွားတယ်..ကောင်းလိုက်တဲ့ ပို့ စ်..
ပင်လယ်သေကို အကြောင်းပြုပြီး အသိပညာပေးသွားတာ ကောင်းမှကောင်းဘဲ မချောရေ။
ဟုတ်တယ်။ ပင်လယ်သေလို မဖြစ်စေရဘူး။ ဂါလိလီရေအိုင်လိုဘဲ ဖြစ်စေရမယ်။
ပေးချင်တဲ့ ဦးတည်ချက်လေး ကောင်းတယ်..း))
ဗဟုသုတတွေ ယူသွားတယ်ချောရေ။ ပင်လယ်သေနဲ့ ပင်လယ်ရှင်ကွာခြားချက်ကို ပုံလေးနဲ့အတူ ချောရဲ့ လက်တွေ့ဆန်တဲ့ သုံးသပ်ချက်လေးတွေကို သဘောကျတယ်။
လောကကြီးနဲ့ သူတစ်ပါးဆီက ရသမျှ အကုန်ယူမဲ့ အယူသာရှိပြီး အပေးမရှိတဲ့ ပင်လယ်သေလို အတ္တသမား သက်သက်အဖြစ် ရှင်သန်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် စီးဝင်တဲ့ ရေလည်း ရှိပြီး ပြန်စီးထွက်တဲ့ ရေထွက်ပေါက်လည်းရှိတဲ့ ဂါလိလီပင်လယ်လို အယူလည်းရှိသလို အပေးလည်းရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်အဖြစ် မျှတစွာ ရှင်သန်မလား ဆိုတာကတော့ ....
လှပသော ရှုခင်းများကို ခံစားရင်း အတွေးပွားခဲ့ပါတယ်ဗျို့။
Actually dead sea is not selfish,She try to gave back for humans as much as she can... u can check here the link.
အဲ့သည် အယူရှိပြီး အပေးပြန်မရှိတဲ့ ပင်လယ် သေလို သတ္တ၀ါ ကောင်တွေ သွေးတိုး ပြီး ကိတ်စ မြန်မြန် တုံးကြပါစေတော်။ ကဲ။ မှတ်ပလား။
အစ်မချောဗဟုသုတလေးတျွေးမျှဝေပေးလို့ကျေးကျေး ပါဗျာ။
မှတ်သားစရာပဲ အစ်မချောရေ၊ အခုမှ ပင်လယ်သေ ဘာလို့ငံ၊ သိရတယ်။ အဲလိုလူမျိုးမဖြစ်အောင်တော့ နေရဦးမယ်။ တခါတလေ တကိုယ်ကောင်းဆန်ချင်တယ်။
နောက်ဆက်တွဲ တွေးစရာလေးတွေပါတဲ့ပို့စ်လေးတွေကို အရမ်းသဘောကျတယ်ချောရေ။ ဗဟုသုတကော အတွေးတွေကိုကောမျှဝေပေးတဲ့ချောကို ကျေးဇူး...း))
ဗဟုသုတကိုပေးနိုင်စွမ်းရှိပြီး ဘဝတစ်ခုအတွက် အတွေးသစ်တွေရတဲ့ ပင်လယ်သေးလေးပါပဲ အချောရေ... နှစ်မျိုးလုံးအတွက် ကျေးဇူး ကမ္ဘာဆိုင်ယော....
မချောက ဗဟုသုတအရင်မျှပြီး အတွေးအခေါ်ပါပေးသွားတာ။ ပင်လယ်သေမဟုတ်တာ အသေအချာပေါ့။